Kpamkpam Awe.sm Social Media Analytics | Martech Zone
N'ihe banyere mgbasa ozi mgbasa ozi, nchịkọta bụ onye na-agbanwe egwuregwu. Na-enweghị nchịkọta ọ na-esote ihe na-agaghị ekwe omume iji chọpụta nke mkpọsa na-aga nke ọma, ebee ga-eduzi ego mgbasa ozi, yana ihe jikọrọ ya na ndị ahịa. Otú ọ dị nchịkọta n'ihi nchịkọta abaghị uru. Naanị ndị na-akọwa ka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya si gbakwunye uru ma ọ bụ rụpụta ngbanwe.
Ị.sm na-amalite arụmọrụ arụmọrụ maka mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ na - akwalite mgbasa ozi mmekọrịta nchịkọta site na "nghọta nwere ike ime ihe," na-enye ndị ọchụnta ego na ndị ahịa ahịa ohere iji nweta azịza doro anya ma tụọ ha maka ajụjụ dịka ma ọ bụrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na-emepụta clicks na weebụsaịtị, ole n'ime ụdị clicks ahụ gbanwere, uru nke mgbanwe dị otú ahụ, na ndị ọzọ.
awe.sm bụ usoro ụzọ na - eduga maka ụlọ ọrụ ijikọ data mmekọrịta. Anyị na-atụle otu azụmaahịa dị ka Facebook na Twitter na mmelite Twitter na-eduga na nsonaazụ bara uru, dị ka ntinye aka, ịzụrụ, na ebumnuche azụmahịa ndị ọzọ.
Nke a bụ mkparịta ụka Scobleizer na-egosi Ị.sm na VIPLi.st, ngwa ọrụ na-egosipụta ikike nke Awe.sm:
Awe.sm na-enye ngwa ọrụ ibipụta akwụkwọ, ma ọ bụ ịnwere ike iwebata ya na arụmọrụ dị adị. Ọ na-agbaso mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla n'otu n'otu ma na-enye nkọwa zuru ezu dịka ọwa, oge nke ụbọchị, izi ozi, ọdịnaya na ndị ọzọ. Ọ na-ejikọta na Google Analytics ma na-enye Nloghachi na ntinye nke mgbasa ozi mmekọrịta dị ka tụnyere ụzọ ahịa ndị ọzọ.
Usoro nke ọkwa.s.s ọ bụla na-enye ohere iji atụnyere dị mfe iji chọpụta njikọta pịa. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ nwere ike ịdebanye aha maka ihe omume ezigara. Awe.sm na-akụda ma chọpụta site na nke tweet ma ọ bụ re-tweet, ma ọ bụ post Facebook ma ọ bụ kesaa ndị mmadụ debanyere aha, si. Na, akụkọ ahụ karịrị nanị ịdekọ ihe ndị masịrị ma ọ bụ mbak, ma nye usoro ma ọ bụ uru na usoro ego.
Awe.sm na-enye atumatu ato dị iche iche: atụmatụ nke onwe maka otu oru ngo, atụmatụ pro nke na-enye ohere ijikwa ọrụ iri dị iche iche n'otu oge na atụmatụ ụlọ ọrụ na-enye ohere ijikwa ọnụọgụ na-akparaghị ókè nke ọrụ n'otu oge. Atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ na-enye nhọrọ nchịkọta mgbasa ozi ọha na eze na-arụ ọrụ nsuso nhọrọ gụnyere ọrụ agbakwunyere dịka URLs omenala, akụkọ ahaziri ahazi, ikike iji jikọta data awe.sm n'ime akụkọ ụlọ na ndị ọzọ.
Tags: nchịkọta apiAPIegwu.smrobert na -ekwu okwunchịkọta mmadụ mgbasa ozielekọta mmadụ media apivipli.st
Jun 20, 2012 na 5:35 AM
Social media ahịa analytics bụ oké ụzọ iji gosi otú mmadụ ọwa-ekere òkè dị oké mkpa na nsuso gị na saịtị…